Meet Point Travels – sajilO Online
के तपाईं जनकपुरधाममा एयर टिकेटिङ्ग तथा ट्राभल एण्ड टूरका लागि भरपर्दो स्थानको खोजी मा हुनुहुन्छ ? त्यसोभए अब ढुक्क हुनुहोस ! जनकपुर धामको शिव चोकमा मोहम्बत आर्फिन अलि ले बिगत लामो समय देखि मिट पोइन्ट ट्राभल्स ( Meet point travels ) सन्चालन गरिरहनु भएको छ ! जहाँ रास्ट्रीय तथा अन्तरास्ट्रिय हवाई टिकट तथा ट्राभल एण्ड टूरको राम्रो ब्याबस्था गरिएको छ ! सजिलो अन्लाईनका मेम्बरहरूका लागि यहाँ उपलब्ध सेवाहरूमा विशेष छुट्को पनि ब्याबस्था गरिएको छ है ! एकपटक अवस्य पाल्नुहोला !!
Pro: mohambat aarfin ali
Contact : 9851116158 / 9801600148
Categories:	JANAKPURTRAVEL & TOUR'S
Tags: shiv chok